Indlela ukuba umqambi blockchain - Blockchain News
Ukuba baphupha wokudala cryptocurrency yakho, ukufunda ukubhala indlela izivumelwano smart kunye nezicelo blockchain, kodwa musa ukuqonda lwenkqubo, okanye ukuba sele ukuphuhlisa ixesha elide, kodwa wafunda kuphela malunga cryptocurrencies kwaye ufuna ukuba uqeqeshe, kunokwenzeka. Kweli nqaku, siza kukuxelela indlela ukufunda ngokuzimeleyo umbuzo, uya kuba yintoni nolwazi luncedo nalapho uzifune.
Luhlobo olunjani isiseko efunekayo ukuze uphuhliso blockchain?
Ukuba sithetha malunga nophuhliso kwezivumelwano smart ngeminye kumaqonga, umzekelo, Ethereum, ke “isiseko” akufuneki. Ufuna kuphela ukukwazi ukusebenzisa iinjini zokuphendla kunye ukunyamezelana. bazenza, izivumelwano smart akhulelwa kanye ukuze bakwazi ukwenza ngabantu abangengabo eziqhelekileyo ikakhulukazi ikhowudi. Ubunzima kuphela ezinokuvela kukunqongophala kwezixhobo zoqeqesho, ngokuba obu bugcisa usemncane kakhulu.
Ukuba sithetha uphuhliso blockchain yethu, ngoko isiseko esinzulu iyafuneka. Kodwa ke akukho nto iya kuba yanele.
Naluphi ulwazi ukuthenga ezixabisa
Eyona nto ibalulekileyo kukuba ukuqonda indlela esebenza ngayo iteknoloji. ukuba Uninzi umda kuphuhliso blockchain enxulumene awohluke ubuchwepheshe, leyo akavumi ukusetyenziswa kwezinye iipateni ukuhla nokunyuka. nale, ngobunzima yokuqala ngexesha ukuntywiliselwa isigaba ezivela ezihambelana. kunjalo, emva une ukuqonda ubuchwepheshe ngokwayo, iingxaki ukwenzela ukuba bagqwese olunye lweelwimi lwenkqubo ukubhala izivumelwano smart iza kuvela ayisekho. Ukwengeza, Ndikucebisa ukufunda ngenyameko IPhepha leNgcaciso yoMgaqo le cryptocurrency, ngokusekelwe koko uza kubhala izivumelwano smart.
Ngaba kunokwenzeka ukuba ukufunda okanye ngcono ngokuzimela ukuthatha izifundo ezizodwa?
Kanjalo, naluphi na ulwazi ngoku zingathengwa ngokuzimeleyo, ubuncinane kuba uninzi lweeprojekthi zibekwe phezu GitHub. Eyona ngxaki inkulu isantya yokufumana ulwazi. Kwisandle esinye, kukho ulwazi oluninzi malunga blockchain, kodwa kukha kakhulu, ukuze ixesha elininzi oko kuya ngococo data. Kwelinye icala, kukho ingozi yokuba nje phinda zonke izenzo katitshala, ukukopisha bonke ikhowudi ukusuka kwincwadi, kodwa akuyi kufunda nto. ngoko ke, Bendiya Sicebisa ukuthatha izifundo apho ungenza ngokukhawuleza bafumane ulwazi olusisiseko kunye ngaxeshanye inxaxheba self-isifundo, umzekelo, umgomo – ukuze kuphunyezwe yeprojekthi ethile.
Zeziphi iilwimi iinkqubo ezifunekayo?
Sikholelwa ukuba ayenzi ingqiqo kwahlula iilwimi kweenkqubo yi iqondo eziluncedo ekufundeni into entsha. A ulwimi lokuprograma sisixhobo kuphela oko kumlungele na iimeko ezithile.
Kwiinkampani ezinkulu evela Silicon Valley ngokubanzi akukho into efana umakhi ngolwimi olunye okanye kwelinye. Ngoko ke ukuba uyakwazi programmer kuyinto plus enkulu. Ukuba une ukuqonda indlela yokwenza kakuhle, ukwazi imigaqo esisiseko yokwakha izakhiwo kwelivi iipateni yi plus enkulu.
imithombo eziluncedo ukuba ingcali labaqalayo
Sinyusa incwadi developer Andreas M. Antonopoulos. kwakhona, kufuneka ufunde Paper White cryptocurrency, ngokusekelwe uya kulo ukuba. Emva kokuba uqonde ubuchwepheshe ngokwayo, ukuya phambili ekufundeni amaxwebhu. Asazi singacebisi nangoko ukuqalela ekwenziweni iwaka elinye tutorials, kuba ngenxa yokuba obu bugcisa olingana, kuphela namaxwebhu asemthethweni ayanceda umthombo othembekileyo kuphela.
Kodwa emva kokufunda amaxwebhu, ungaya kwi ukwenza tutorials elula. Njengoko for ikhowudi imizekelo, kukho abaliqela iiprojekthi umthombo evulekileyo ukuba kulula ukufumana ku GitHub.
Kwakhona ngoku kukho uluntu yabakhi, yocingo chat, izifundo online, Amaqela e LinkedIn njalo-njalo, ngoko ukuba kukho iingxaki kunye ukufuna loluntu.
Indlela ukuba umqambi blockchain?
★★★ 7 Iikhosi TOP Blockchain Development, Training and Certifications ★★★
BitGo ukuzuza ki ...
Bittrex uya kuvumela i ...
Post Previous:Blockchain News 30 EyoMqungu 2018
Post Next:Blockchain News 31 EyoMqungu 2018